Airport Shuttle ho an'i Zurich sy Basel - Exclusive and comfortable
Airport Shuttle ho an'i Zurich sy Basel
Mankanesa soa aman-tsara miaraka amin'ny piraofilinao Premium
Miezaka ny hivezivezy amin'ny orinasa na amin'ny orinasa ve ianao ary tianao ve ny mandehandeha mikisaka amin'ny seranana seranam-piaramanidina azo antoka alohan'ny handehananao?
Ny mpitaingina anay dia handray anao amin'ny iray amin'ireo seranan-tsambon'i Alemana tsara tarehy sy tsara indrindra avy any an-trano, avy amin'ny birao na eo am-bavahadin'ny seranam-piaramanidina. Mazava ho azy fa hanampy anareo amin'ny entana izahay. Mazava ho azy, raha tara vao tonga ny fiaramanidina dia tsy hamela anareo hidina fa hiandry ny fahatongavanareo.
Mankanesa ary mifalia amin'ny toerana
Maro amin'ireo mpandeha no mampiasa ny serivisy famindrana ny seranam-piaramanidina eo anelanelan'i Zurich Airport sy Euro Airport Basel, satria ny fifamoivoizana mivantana mivantana dia tsy mihatra mivantana eo anelanelan'ireo tetezana roa. Mba hananganana fiara fitateram-bahoaka tsy dia mampifaly na fiarandalamby mandeha amin'ny taxi, ny safidy ho an'ny seranan-tsambo dia ny fanapahan-kevitra tsara. Ny toerana misy anay ao Basel eo amin'ny telozon'ny sisintany misy an'i Frantsa, Soisa sy Alemana, izahay ihany koa no mpiara-miombona tsara aminareo raha te-hanana limousine manokana any 70 km any Freiburg ianao na mandeha mivantana any Stuttgart na Munich.
Airport Shuttle Zurich sy Basel - Tel: + 41 78 861 35 50
Alim-baventy hatrany am-piandohana
Mandeha amin'ny maha-olona anao ve ianao amin'ny fivorian'ny orinasa lehibe? Avy eo dia afaka miantsena amin'ny fiaramanidina mangina ianao, azo atokisana amin'ny fotoana mahamety azy ary, mazava ho azy, ny fahamendrehan'ny 100% mandritra ny antso an-telefaona ataonareo. Amin'ny fianakaviana na vondron'olona dia manana seranan-tsambo malalaka malalaka eo am-pelatànanao ianao, izay ahafahanao mankafy ny fiaramanidina mahazatra amin'ny seranan-tsambo any amin'ny seranam-piaramanidina manerana an'i Soisa tsara tarehy. Ankoatra ny fiarovana sy ny fahamatorana, ny mpamily dia maniry ny hahatonga ny dia hahasambatra anareo araka izay tratra.
Boky fandrakofam-peo an-tserasera
Azafady mba avelao anay ny fampahafantarana amin'ny daty fitsidihanao anay fifandraisanaHifandray aminareo haingana araka izay azo atao izahay mba hiresaka momba ireo antsipiriany. Azonao atonina amin'ny finday amin'ny + 41 78 861 35 50
Notsongaina tamin'ny: Basel Airport mivezivezy Limousine service Zuerich
taxi.flughafen Janoary 23, 2017 Janoary 23, 2017 Uncategorized No comments
← Fandefasana fiara an-dalamby Basel - fitsangatsanganana mankany Soisa
360 ° Fanomezana tolotr'asa ho an'ireo vahiny hotely any Basel →